Ebe kachasị mma ị ga-eleta na France! - LucidPix
Bonjour si France! Iji mee ka afọ ju agụụ njem gị n'oge a na-adọpụ iche, anyị na-enye gị ndepụta kachasị nke ebe kachasị mma ị ga-eleta na obodo a mara mma na Europe. Chekwaa peeji a na ibe edokwubara gi ma debe ya dika ihe nkpacha maka mgbe njem na-adighi nma. Kedu ụzọ ka mma isi gosipụta ebe kachasị mma ileta na France karịa 3D iji LucidPix.
N'ịbụ nke dị na French Riviera, ọtụtụ mmadụ na-asọpụrụ obodo a, gụnyere ụfọdụ ndi isi di elu. Nchịkọta ụlọ oriri na ọ andụ andụ ha na osimiri ndị ama ama dị ka Pampelonne, etinyela obodo osimiri French a na map. Ebe njem a zuru oke n’oge ọnwa ọkọchị mgbe ịchọrọ izu ike n’elu àkwà anwụ n’akụkụ ụfọdụ klọb osimiri mara mma dị oke ọnụ - ị nwere ike ịlele ha Ebe a!
Isi obodo France na ike ịbụ otu n'ime ama ama njem njem gburugburu ụwa, Paris bụ crème de la crème nke ebe ị ga-eleta na Europe. Obodo a ma ama bu ọtụtụ ebe njem nleta site na Le Tour Eiffel rue Les Champs Elysées, na ekwere gị nkwa na ike agaghị agwụ gị. Lelee na Plant Ware Ebe nkiri nlere anya dị elu na Paris maka uzo zuru ezu banyere ebe aga eleta.
Obodo France a, nke a makwaara dị ka La Ville Rose n'ihi brik na ụlọ ya, dị na ndịda mpaghara obodo ahụ. Obodo ahụ bụ nrọ onye ọ bụla na-ere ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ngalaba dịka Galeries La Fayette na ụdị dịka Zara, n'etiti ndị na-aga ije. Na mgbakwunye, ọ bụ naanị ụgbọ ala elekere abụọ na ọkara site na oke Spanish!
N'ịbụ nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke France, Bordeaux na-adọta ọtụtụ puku ndị njem kwa afọ ịchọ mmanya a ma ama n'ụwa. Obodo a na - emepụta mmanya kemgbe narị afọ nke asatọ ma dabere na ngwaahịa ahụ dịka isi mmalite ego ha nwetara. Ọ na-edepụtara dị ka otu n'ime Ebe UNESCO World Heritage saịtị dị ka “ihe atụ pụtara ìhè nke ọhụụ oge gboo na neoclassical na [na-egosi] ịdị n'otu ụlọ na ụkpụrụ ụlọ na mmekọrịta chiri anya.”
Been garala n'otu n'ime ebe ndị a na France? Cgbanwe foto njem gị gaa 3D site na iji LucidPix ma echefukwala itinye mkpado maka ohere iji gosipụta anyị Instagram!
Ndụmọdụ maka ịse foto obodo →← Ihe ị ga-eme na mpaghara Bay n’oge Covid-19